Marwada murashaxa dalka Mayakan John Kerry oo ilaa iyo hadda hogaaminayo isreeb reebka xisbiga demoqraadiga si uu ula tartamo madaxweyne Bush ayaa qaba haweenay Africanka cad ah oo la yiraahdo Teresa Heinz. Teresa waxa ay ku dhalatay dalak Muzambiik ee dhinaca koofureed ee Africa. Waxay na wax ku baratay dalka South Africa iyo Swizerland waxayna ku hadashaa 5 luqo.
Waxay ay dalka maraykanka tagtay 1966 waxayna u shaqaysay UN tarjumaan ahaan ka dibna waxay guursatay Senator ku dhintay shil diyaaradeed oo la oran jiray Senator John Heinz .waxayna u dhashay 3 wiil.
John Kerry oo asagana leh 2 gabdhood iyo Teresa waxay is guursadeen 1995. Haddii uu ku guulaysto doorashada madaxweynaha dalka Maraykanka Teresa waxay noqon doontaa marwadii labaad ee degta aqalka cad ee aan ku dhalan dalka Maraykanka. Bilawgii dalka Maraykanka taariikhdiis mid ka mid ah labadii madaxweyne ee isdhalay ee ahaa Adams Family ayaa guursaday haweenay aan ku dhalan dalka Maraykanka.
Murashax John Kerry ayaa dib u dhigtay inuu ku faano khibradda xaaskiisa ilaa uu hubsado inuu yahay ka ay isku raaceen xisbigiisa demoqraadiga oo uu ku soo baxo ka dibna uu kula tartamo madaxweyne Bush. Dadka siyaasadda indho indheeyaa waxa ay leeyihiin aqoonteeda UN iyo Africa iyo dunida kale wax wayn ayay u tari doontaa murashax John Kerry inta uu ku jiro loolanka iyo haddiiba uu ku guulaysto inuu iska caabiyo xisbiga jamhuuriga oo la filayo dhowaan inay dabooka ka qaadi doonaan recordkiisa iyo cambaarayn lagu dheehay dacaayada aad looga soo shaqeeyay oo sida la sheegay badan keed diyaar ah.
USA: Tartanka Aqalka Cad oo La isla soo Galayo Xayndaabka Muslimiinta
»USA: Tartanka Aqalka Cad oo Madaxa La Galay Is Gobalysi